Izinzuzo emakethe futhi amathemba KOOWHEEL hoverboard K8 - Jomo Technology Co., Ltd
1. Isimo ukuthuthukiswa yokuzibona ngokulingene isikuta
2. Gcina emakethe ibhalansi imoto.
3. izinzuzo K8 emakethe futhi Amathemba
Eminyakeni yamuva, ne kokuvuselelwa ukusetshenziswa, omusha izimoto amandla - izimoto ibhalansi zazithandwe abathengi basekhaya nabamazwe angaphandle sokuvikelwa kwayo, izici kwezomnotho kanye elula, abathengi bazuze kokuvuselelwa zokuthutha ngokufunwa, emakethe kwezilwandle inkulu, nethemba ukuthuthukiswa kulindeleke. Kusukela global entsha imboni yezamandla imoto, imoto olinganiselayo, smart imoto iyoba bomthombo ka saleso senzakalo esizayo. China yilona lizwe nge okukhiphayo ngobukhulu futhi zokuthumela kagesi self ngokulingene isikuta emhlabeni, lokulandisa 90% i-Global Balance isikuta umkhakha. Nokho, ngenxa yokuntuleka iziqondiso ezifanele yasekhaya namazinga, isithuthuthu kagesi nomkhiqizi umklamo womkhiqizo futhi senqubo yokukhiqiza ngaphandle kokuqondiswa ejwayelekile, ukungabi kweso, okuholela izinga mkhiqizo ayiqinisekile, emakethe njenge amaqoqo, le copycat, emakethe ivele igcwale imikhiqizo mbumbulu yenziwe ngobudlabha, abathengi abakwazi ukubona izinga umkhiqizo. Amalungelo esisemthethweni futhi izithakazelo ayiqinisekile, izingozi zezokuphepha Mkhiqizo sika abe kokugqashuka esibanzi ngonyaka odlule, ukuletha ukulahlekelwa omkhulu ukuze abathengi, futhi ngathiyeka sina nokuthengiswa lo kagesi ibhalansi isikuta sika.
Kusinda ezinamandla, izinga ezinhle silondoloze ekukhuleni kahle ukulinganisela imoto
Imboni idinga amabhizinisi akhiqiza imikhiqizo izinga, futhi abasebenzisi badinga amabhizinisi anganikeza zokuphepha. Ukuze ibhalansi imoto umkhakha namanje sibhekene nobunzima, amabhizinisi kudingeka zibhekane umkhakha, self-reflection ukufuna ushintsho futhi intuthuko, ukuze izinga umkhiqizo nowokuqala, sekuchaza imithetho umkhakha, futhi ngokuhlanganyela ukudala indawo evumayo emakethe iphaliswano umkhakha ngaphansi izindinganiso zokuphepha esiqinile. Uma kucatshangelwa ezishisayo 6.5 intshi ezivamile self sekulinganisa isikuta ezithengiswa ibhalansi imoto emakethe. Ngakolunye uhlangothi, i-umkhakha isikali yandisa ngokushesha, kodwa ngakolunye uhlangothi kuba umncintiswano sengididekile. "A muntu ngaphakathi izifundo eveza ukuthi le ntatheli. Ngenxa yokuntuleka izindinganiso, abanye kagesi ibhalansi isikuta abakhiqizi ukusebenzisa izingxenye eliphansi, inhlangano ezimbili nezinye izindlela zokunciphisa izindleko, akulona ihaba ukusho, lo mncintiswano ngonya angenza yonke umkhakha ngokushesha ubuyela zero, lokhu eziyikhulu namashumi bhiliyoni yuan , ubukhulu emakethe ye umkhakha ibhalansi imoto Ubhekene futhi obukhulu.
Indlela ukuqeda izinambuzane kulezi izimboni kanye nokugcina impilo enhle ukulinganisela imoto umkhakha sika, KOOWHEEL ubuchwepheshe bethu kusukela nje elalakhelwe manje ibilokhu ukunamathela izinga nokuphepha kuqala, ukuze sifinyelele zero izingozi, ukunikeza ukuphepha ukuphepha abathengi. Indlela mncintiswano nge hoverboar 6.5 intshi phansi kunabaphostoli emakethe, lo kusinda ezinamandla ayisishiyagalolunye ngomshikisho asisamukeli sethemba ukuthi ezivamile 6.5 intshi onobuhle, kodwa kukhethwa nokwenza nemibono emisha, ukunikeza abathengi entsha design 6.5 intshi K8 kagesi ibhalansi isikuta ukuze kuhlangatshezwane nesidingo emakethe ke kuyodingeka eyingozi esikhundleni ezivamile 6.5 intshi Kwakungekho parallel emlandweni.
Izinzuzo emakethe K8 kanye Amathemba
1. imikhiqizo yangasese imodeli.
Kwadalwa Italy Milan, ukubukeka cool futhi eyingqayizivele, okungenxa yezimo ezikhethekile isakhiwo isimiso, yayithandwa abathengi European futhi American. Phula ukubukeka ubudala futhi aphule izithiyo sokwephulwa kwe-patent
2. PCB Taotao uhlelo ezimbili
Yokutholwa ezimbili uhlelo umbadlana kusukela Taotao isayensi nobuchwepheshe inkampani. Kuqhathaniswa emakethe ezishibhile yegama lomkhiqizo uhlelo olulodwa umbadlana, Taotao has ukuzinza kangcono uhlelo ezimbili, kunikela lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela ukuphepha siqu abasebenzisi.
Taotao Tech: 1, PC, oyinhloko, ibhodi, nge, 2pcs, gyroscopes.
Okokuqala-class izinga motor e-Hong Hong Motors has izinzuzo izinga isiqinisekiso, ogibele bushelelezi futhi akukho umsindo.
Amandla uhlobo ibattery, ukuphila isikhathi eside. Koowheel K8 isebenzisa 14 okusindisa core 24V ibhethri basekhaya amaphakethe amandla webhethri, ukuphila isikhathi eside futhi abantu bavikelekile ezingozini zomlilo ihlolwe, ugijime kuka nozakwabo emakethe 36V ibhalansi isikuta, amandla enkulu!
Ibattery wenziwe impahla engangenwa umlilo, futhi kuphephile kunephakheji ezithambile esetshenziswa nozakwethu
5. Hand izindophi
Ngodobo uhlobo intambo ephathekayo, kungaba zithululwe, amahle elula, futhi kungenziwa ephethwe, uma iqhathaniswa naso ezivamile 6.5 intshi imoto olinganiselayo. Kulula ukuba baphathe akukho esikhwameni
6. intengo inzuzo